Koonfurta Sudan, dalka ugu da’da yar bahweynta caalamka, waxaa uu dunida ku soo biiray 9kii July, 2011, ka dib markii bishii January shacabku 95% u codeeyeen goonni-isu-taagga. Aftidaa waxaa oggolaatay xukuumaddii Sudan. Isla markaana, waxaa goobjoog ka ahaa urur goboleedka IGAD. Labada dhinac ee xukuumadda iyo Jabhadda SPLM ee u diriraysay xornimada waxaa lagu dhexdhexaadiyay in la madax-banneeyo K. Sudan, haddii shacabku uu u codeeyo goonni-isu-taagga. Hase ahaatee, xeel-dheerayaasha sharci ee u kuur gala arrimaha goonni-isu-taagga, waxaa ay aaminsan yahiin K. Sudan in aanay buuxin sharciyaddii caalami oo looga baahnaa dal madax-bannaan. Si kale, haddii loo sheego, in aanay xaq u lahayn aqoonsiga. Haddaba, qormadan waxaa aan ku lafo-guraynaa madax-bannaanida K. Suudaan iyo sida ay ugu suurta-gashay hanashada aqoonsigu.
#1Araweelo News Network > Qalinleyda & Qoraaladda > Geeddi-Socodka Hannaanka Somaaliland, Xaggee Hayaanku Foolka Ku Hayaa?